Ukufunda + Amakhono - GO! SPECTRUM SCHOOL
Humusha i-Spectrumschool kolunye ulimi
spectrum School > Izifundo zethu > Ukufunda + Amakhono
Funda + amakhono
(imfundo esezingeni eligcwele le-BSO / TSO)
Ulandela inkambo yesikhathi esigcwele ezingeni le-BSO / TSO. Uthola ulwazi oluyisisekelo. Ngaphezu kwalokho, unamandla emkhakheni wakho.
Ungalandela lo mzila campus Ruggeveld.
Uma udlulisa enye yezinhlelo zethu ze-degree, uzoyifeza idiploma yemfundo yesibili. Isitifiketi sokuphathwa kwebhizinisi kungenzeka. I Izifundo ze-BSO ngikulungiselele emakethe yomsebenzi. Wena ngokukhethekile ensimini yakho ekhethiwe ngonyaka we-7 onguchwepheshe. I Ukuqeqeshwa kwe-TSO ukukunika isisekelo esiqinile izifundo eziphakeme qala phakathi kwenkambu yakho.
Isipesheli sethu semisebenzi yesizinda nesizinda somhlangano amathuba amaningi okusebenza.
Ngenxa yokuthi siseduze ukubambisana nezinkampani sikuqondisa kwelinye indawo enhle emakethe yezabasebenzi.
Sikunikeza eyodwa umzila owenziwe kahle kuphi isiqondiso somuntu ngamunye futhi eyodwa isimo sokufunda esifudumele phakathi.
Izifundo zokuqeqesha zeZakhono +
Chofoza kwenye yezindawo ezilandelayo ezithakazelisayo ukuthola imfundo yakho.
I-1e Degree Industry
I-1e Degree VOICE
I-1e Degree Sport
STEM> Ubunjiniyela nobuchwepheshe
Ukwakha & Izinkuni
IZIKHATHI EZIPHELELE // B-STREAM // CAMPUS RUGGEVELD
Ungakwazi ukunambitha iziyalo ezahlukene ezifana nemishini, insimbi, ugesi, izinkuni, njll. Ngale ndlela ungenza isifundo esifanele sokufunda esikoleni sezimboni esikoleni se-2e.
ISIKHATHI ESIPHELELE // A-STREAM // ICAMPUS RUGGEVELD
I-STEM imelela i-Science, Technology, Engineering kanye neMathematics. Njengowomdabu wase-digital wenza amakhono olwazi, ukudala, ukucabangela nokuxazulula izinkinga, ukucabanga okuphikisanayo nokunye okuningi!
ulandela imfundo ebanzi jikelele. Ngaphezu kwalokho, ulwazi olunamagatsha ahlukene wezemidlalo. Ngale ndlela ulungele ukuqondiswa kwezemidlalo.
ISIKHATHI ESIPHELELE // TSO // CAMPUS RUGGEVELD
Uthola umhlaba wezinjini nama-generator, ukuzenzekelayo, izilawuli ze-PLC, ... Ufunda ukuthi imishini ilawulwa kanjani futhi yenzelwe ngendlela yekhompyutha (CNC, CAD-CAM). Isingeniso esiphelele kwezobuchwepheshe bemboni.
Ubuchwepheshe kagesi & amasu wokufaka kagesi
Ujwayelene nogesi kanye nokufakwa kobuchwepheshe futhi uzilungiselele ubuchwepheshe obuphathekayo emkhakheni kagesi.
Ezemfundo Yezomzimba Nezemidlalo
I-Spectrum Athletes ilandela imfundo yezemidlalo esebenzayo futhi ijwayele imidlalo ehlukene (i-athletics, imidlalo yebhola, i-gymnastics, ukubhukuda ...). Futhi isigqi, ukuqeqeshwa komzimba, ukukhuluma nokuzivikela kuxoxwa ngazo. Ingabe nawe uzoba i-Spectrum Athlete?
UKUPHUMA KWENXUMUME YEYAKA // ISIKHATHI ESINGCWELE // BSO // ICAMPUS INDLELA
Ufunda ukuthola amaphutha okuhlola okulawulwa yikhompyutha kumdwebo we-elektroniki wemoto. Ufunda futhi amasu okuxazulula izinkinga cishe.
ISIKHATHI ESIPHELELE // BSO // CAMPUS RUGGEVELD
Ufunda izindlela zokuhweba; yenza ukuxilongwa okulungile uma kwenzeka ukukhubazeka, kugcina izimoto futhi ulungisa ngokuvumelana nemithetho yobuciko. Usebenza ngokuzimela ezimotweni, emaveni, njll.
Imishini Yokugcina Imoto Yesibili
DUAAL // BSO // ICAMPUS RUGGEVELD
Ufunda ukusebenza ngokuzimela ezimotweni, ama-vans, amaloli, njll. ufunda ukwenza izixilongo ezifanele izifo, ugcine izimoto futhi ulungise ngokuvumelana nemithetho yobuciko.
Ingabe uthanda ukusebenza ngezandla zakho nangezinto zemvelo? Kule nkambo uthola ulwazi nolwazi olusebenzayo emkhakheni wezingubo zokungaphakathi nezangaphandle, ukukhiqiza ifenisha nokuhlobisa kwangaphakathi.
Wena ngokukhethekile ekuhlobiseni nasekuqedeni izinto zangaphakathi.
Ufunda ukufaka ukufakelwa kagesi okusha emakhaya. Ngaphezu kwalokho, ungabuyekeza futhi ugcine ukufakwa okukhona. Uzofunda futhi ukusebenza ezindaweni eziyinkimbinkimbi zokuhlala kanye / noma izimboni zikagesi.
Umfakisi kagesi owesibili
Ufunda ukufaka ukufakelwa kagesi okusha emakhaya nasezakhiweni. Ngaphezu kwalokho, ungabuyekeza futhi ugcine ukufakwa okukhona. Uzofunda futhi ukusebenza ezindaweni eziyinkimbinkimbi zokuhlala kanye / noma izimboni zikagesi.
Unjiniyela kagesi uDuaal
UKUPHUMA KWEN7O YONYAKA // DUAL // BSO // ICAMPUS RUGGEVELD
Wena ngokukhethekile ekunakekelweni, ukuhlangana nokulungiswa ngakolunye uhlangothi lwezingcweti, iminyango, ama-escalators; ngakolunye uhlangothi ekuhanjisweni kwamandla, ukushayela kanye nobuchwepheshe obuphezulu.
Imishini eyisisekelo yemishini
Ufunda imishini yamandla noma ikhompiyutha elawulwayo ukuhlela izinto. Uqala ukujika, ukugaya nokugaya futhi ufunda ukuhlangana nokudiliza ukwakha okwakhiwa. Ufunda nokuthi ungasebenza kanjani nomshini we-CNC. Ufunda ukubhekana kahle nemidwebo yokusebenza, ukuhlaziya umsebenzi kanye nezindlela zokusebenza.
umshini amathuluzi Computer-elawulwa
Wena ngokukhethekile kumasu ahlukahlukene we-CNC, kanye nokushicilelwa kwe-3D. Ufunda ukwenza imidwebo nge-software yobuchwepheshe, ngenhloso yokukhiqiza kwe-CNC.
Lolu qeqesho lukulungiselela imisebenzi yezingane, ukunakekelwa kwasebekhulile kanye nasekhaya.